Festival Tamaga Midôla : Miditra amin’ny dingan’ny famaranana
06/10/2018 admintriatra 0
Efa saika tafiditra amin’ny dingan’ny famaranana avokoa ireo taranjam-pifaninanana efatra (beach soccer, beach volley, beach handball ary beach rugby) hiadiana amin’ny « Festival Tamaga Midôla ». Hetsika karakarain’ny fikambanana Tafaray, ary tanterahina amin’izao fotoana izao …Tohiny
Fotoana iray andrasan’ny mpankafy jazz ao anatin’ny hetsika Madajazzcar ny seho etsy Antsahamanitra. Anio manomboka amin’ny 1 ora antoandro no hanolorana ny « Madajazzcar », izay ahitana mozika maroloko. Hifarimbona hanafana ny « Podium jazz …Tohiny
Hetsika « Mandio » : Mpaka an-keriny 66 voasambotra
Tao anatin’ny 20 andro nanatanterahina ny hetsika “mandio” dia nahatratra 66 ny mpaka an-keriny voasambotra tany amin’ny faritra Betsiboka, Alaotra Mangoro, Boeny sy Sofia ary Analamanga. Io no tarehimarika nambaran’i Ralambomanana Dera Abel, kaomandan’ny vondron-tobim-paritra …Tohiny
Lozam-pifamoivoizana tany Marozevo : Zaza efa-bolana maty tsy tra-drano
Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray ny lalam-pirenena faha-2. Zaza vao efa-bolana monja no maty tsy tra-drano vokatry ny fifandonana nateraky ny Taksiborosy Sprinter iray sy kamio tany Mahasoa Marozevo, omaly antoandro tokony ho tamin’ny 11 ora sy …Tohiny
Isan’ireo faritra mbola tara eo amin’ny fampandrosoana ny faritra Melaky, raha oharina amin’ireo faritra hafa eto Madagasikara. Nefa mazava ny tanjon’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery entina hampandrosoana ity faritra ity, ka isan’izany ny hanaovana azy mitarika ...Tohiny